Ubuntu Touch OTA 18 horay ayaa loo sii daayay kuwana waa warkiisa | Laga soo bilaabo Linux
Cusboonaysiinta cusub ee Ubuntu Touch OTA 18 ayaa hadda la soo saaray kaas oo wali ku saleysan Ubuntu 16.04 iyo isbedelada OTA-18 ee aadka u muuqda ayaa ah dib u habeynta lagu sameeyay adeegga Media-hub, iyo waliba guud ahaan kaladuwanaansho guud ee waxqabadka iyo isticmaalka xusuusta iyo waxyaabo kale.
Kuwa aan wali ka warqabin Ubuntu Touch, waa inaad ogaataa inay taasi tahay qaybinta moobiil wareejin ah oo markii hore ay soo saartay Canonical kaasoo markii dambe dib uga noqday una gudbay gacanta mashruucii UBports.
1 Wararka ugu muhiimsan ee Ubuntu Touch OTA 18
2 Hel Ubuntu Taabashada OTA-18
Wararka ugu muhiimsan ee Ubuntu Touch OTA 18
Sida ku xusan bilowga, cusbooneysiintan cusub ee Ubuntu Taabashadu waxay ku sii socotaa nooca Ubuntu 16.04, laakiin waxaa la sheegay in dadaalka horumariyayaashu ay suurtagal noqotay in diiradda la saaro shaqada mustaqbalka si loogu diyaar garoobo u gudubka Ubuntu 20.04.
Isbedelada ka muuqda OTA-da cusub, a dib-u-habeyn lagu sameeyay hirgelinta adeegga 'Media-hub', kaas oo mas'uul ka ah ciyaarida codadka iyo muuqaalka muuqaalka Xarunta cusub ee 'Media-hub' arrimaha xasiloonida iyo ballaadhinta ayaa la xaliyay, Qaab dhismeedka koodhka ayaa loo habeeyay si loo fududeeyo ka mid noqoshada shaqooyinka cusub.
Waxaa sidoo kale la iftiimiyay in habeynta waxqabadka guud ayaa la sameeyay iyo isticmaalka xusuusta, oo loogu talagalay shaqada raaxada leh ee aaladaha ku rakiban 1 GB ee RAM.
Gaar ahaan waxtarka muujinta muuqaalka asalka ah waa la kordhiyay- Adiga oo kaydiya kaliya hal nuqul sawir ah oo leh qaraar u dhigma xalka shaashadda ee RAM, marka la barbardhigo OTA-17, isticmaalka RAM-ka ayaa la dhimay ugu yaraan 30 MB marka la dejinayo sawirkaaga asalka ah iyo illaa 60 MB qalabka. iyadoo xalka shaashadda hooseeyo.
Dhinaca kale, muujinta otomaatiga ah ee kumbuyuutarka shaashadda ayaa la bixiyay marka la furayo tab cusub ee biraawsarka, marka lagu daro kumbuyuutarka shaashadda bixiya suurtagalnimada in la galo calaamadda «°» (degree), iyo sidoo kale lagu daray toobiye kumbuyuutar Ctrl + Alt + T si loogu yeero emulator-ka.
Saacadda digniinta, waqtiga hakadka ee "aan in yar seexdo in yar" qaabka ayaa hadda lagu tirinayaa la xiriirta riixitaanka badhanka, iyo ma ahan bilowga wicitaanka. Haddii aysan jawaab celin ka bixin dhawaaqa, alaarmiga ma baxaayo, wuu iska joogsanayaa daqiiqad.
Taageero loogu daray istiikarada barnaamijka fariinta.
Waraaqda waraaqaha Lomiri ayaa si aad ah uga waxtar badan qaabkan.
Ugu dambeyntii horumariyeyaashu waxay ka faalloodaan u-gudubka Ubuntu 20.04:
Qoraaladeena hore waxay tilmaameen hoos u dhac ku yimid horumarka Ubuntu Touch gudaha Xenial intaanu diyaarinayno una Ubuntu Taabashada nooca ku saleysan Ubuntu 20.04. Waxay u muuqataa in gaabiska halyeeyga waa la dhayalsaday, haddii ay wax jiraan .
Waa run in pequeño koox dad ah oo yaqaan gudaha Ubuntu Touch waxay ka walwalsan yihiin waxyaabo aan ahayn OTA-18. Ratchanan wuxuu diirada saaray helitaanka Lomiri, kaabayaasha ku hareeraysan, iyo kumbuyuutarka oo ku shaqeeya nidaamka Ubuntu 20.04; abuurista sawirada UT ee ku saleysan 20.04; iyo hawlo kale oo badan oo la tirin karo.
Hel Ubuntu Taabashada OTA-18
Kuwa xiiseynaya cusbooneysiintan cusub ee Ubuntu Touch OTA-18, waa inaad ogaataa inay taageero u leedahay OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Meizu MX4 / PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5 / E4.5 / M10, Sony Xperia X / XZ, OnePlus 3 / 3T, Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P, kiniiniga Sony Xperia Z4, Google Pixel 3a, OnePlus Two, F (x) tec Pro1 / Pro1 X, Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy Note 4, Xiaomi Mi A2 iyo Samsung Galaxy S3 Neo + (GT-I9301I).
Kuwa isticmaala Ubuntu Touch ee ku jira kanaalka xasiloon waxay ku heli doonaan cusbooneysiinta OTA iyada oo loo marayo shaashadda Nidaamka Qaab-dhismeedka Nidaamka.
Halka, si aad u hesho cusboonaysiinta isla markiiba, kaliya awood u yeelo helitaanka ADB oo ku socod amarka soo socda 'adb shell':
Iyada oo tan la adeegsanayo qalabka ayaa soo dejinaya cusbooneysiinta oo rakibaya. Nidaamkani wuxuu qaadan karaa wakhti, iyadoo kuxiran xawaaraha soo dejintaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Ubuntu Touch OTA 18 horay ayaa loo sii daayay kuwana waa warkiisa
MongoDB 5.0 waxay ku timaadaa xog qaab taxane ah waqtiga, isbeddelada tirada iyo inbadan